Bulshada gobolka Xudeyda oo ka cabanaysa heerka kuleylka kor u kacay iyo kooraan la'aanta ka jirta - Horn Future
Bulshada gobolka Xudeyda oo ka cabanaysa heerka kuleylka kor u kacay iyo kooraan la’aanta ka jirta
Xudeyda –Dadka deggan gobolka xeebta ah ee Xudeyda ee galbeedka Yemen ayaa waxa ay ka cabanayaan ololka heerka kulkaylka ee sare u kacay xagaagan,taasoo ay ugu sii dartay koaraanka oo gabi ahaan go’an sababo la xidhiidh kadib markii warshada kooraanka laga dhaliyo ee maxaliga ah ay joogsatay intii ay maamulayeen gobolkan maleeshiyadda argagixisada xuuthiyiinta ee shiicada ah.
Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda ee Yemen ayaa ka bilaabay olole goobaha bulshadu ku kulanto si ay u muujiyaan dhibaatada haysata dadweynaha gobolkan,taasoo ah degmada labaad ee ugu dadka badan dalka Yemen marka loo eego tirada dadweynaha deggen.
Kooxdan ayaa waxa ay ku faafiyeen goobahan bulshadu ku kulanto muuqaalada ardayda dugsiyada kuwaas qarqarka sare qaawan oo iska siibay hugii ku siteen qaybaha sare ee jidhkooda kulaylka aadka u ba’an ee haysta daraadii.
Muuqaaladan caruurtan ee la faafiyay ayaa jidhkooda waxa kasoo baxay finan heerka kulaylka ee aadka u sareeya iyo huurka jira daraadeed,halka muuqaalo kale ay muujinayaan kuwa kale oo hurda meel ka baxsan aqaladooda iyagoo raadinaya meel qabow.
Muuqaaladani waa aradayda dugsiyada oo ku jira fasallada iyaga oo qarqar qaawan
Heerka kulaylka ayaa waxa uu kor u kacaa magaalada Xudeyda milayga xagaaga kaasoo gaadho( 45 ° C degree) halka heerka huurka uu gaadho inta u dhaxaysa( 70 iyo 85 Celsius).
Kooraanka ayaa waxa uu weli si buuxda uga go’an yahay 11 gobolo ah oo kuyaala Yemen oo ay ku jirto caasimada Sanca in ka badan muddo sannad ah sababo la xidhiidha xarunta gaaska ee Ma’rib ee laga dhaliyo tamarta kooraanka oo joogsatay , taas oo ah saldhigga ugu weyn ee kooraanka u qaybisa shabakaddaha kooraanka ee qaranka.
Tan iyo intii maleeshiyadda argagixisada shiicada xuutiyiintu ee jar iska xoorada ah ay dagaalka macno darada ah ay galiyeen bulshada Yemen ayaa waxa maalin ba maalinta ka dambeysa kasii daraysa xaalada aadka u ba’an ee nololeed ee ay ku sugan tahay bulshadan oo ah mid kamid kuwo ugu saboolsan dunida.
« Sarkaal matalayay dilaaga Masar ka gaystay afgambiga Sisi oo ku tilmaamay Afrikada”addoomo iyo ay”	» Drowned migrant baby was probably Somali: Italian police